Malleeshiyaad hoostaga Imaaraatka oo billabay in dadka kasoo jeeda Wuqooyiga Yaman ku qasbaan iney isaga tagaan Koonfurta wadankaas. – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
Malleeshiyaad hoostaga Imaaraatka oo billabay in dadka kasoo jeeda Wuqooyiga Yaman ku qasbaan iney isaga tagaan Koonfurta wadankaas.
On Mar 24, 2018 191 0
Dowladda Imaaraatka oo si firfircoon uga howlgaleysa dalka ay colaadu ragaadisay ee Yaman ayaa ku dhaqaaqday tallaabo aan horay loo arag oo ku cusub shacabka mideysan ee dalka Yaman.
Malleeshiyaadka Imaaraatka uu tababaray ee ka howlgala deegaannada koonfurta ee wadanka Yaman ayaa lasoo sheegayaa iney amar buuxa ku siiyeen dadka kasoo jeeda wuqooyiga balse ku sugan koonfurta in sida ugu dhaqsiyaha badan uga guuraan koonfurta.
Qaar kamid ah dadka awaamiirtaas la duldhigay oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in malleeshiyaadka Imaaraatka hoostaga ay sameysteen xabsiyo qarsoodi ah oo dadka lagu tacdiibiyo, islamarkaana si foolxumo loogula dhaqmo.
Tobaneeyo dad ah ayaa gaaray wuqooyiga Yaman oo aysan jirin nabadgeliyo buuxda, maadaama ay malleeshiyaadka Xuuthiyiintu gacanta kuhayaan, islamrkaana diyaaradaha isbaheysiga carbeed ay maalin weliba si cashawaa’I ah u garaacayaan deegaannadaas.
Arintan ayaa qeyb ka ah sida ay sheegayaan aqoonyahanno Yamaniyiin ah qorshe lagu doonayo in lagu kala qeybiyo dalka Yaman, waxaana qorshahaas taageeraya oo doonaya dowladda Imaaraatka Carabta.